UNTOLD STORY OF SEAFARER'S LOVE ~ MSU Portal
12/27/2013 08:10:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION No comments
သူကမေဗေစ့်မေမေသဘောတူခဲ့ဖူးသူပါ.. သူကသဘောင်္အရာရှိတစ်ဦးပေါ့.. သူကသဘောကောင်းတယ်..ပွင့်လင်းတယ်.. ဂရုလဲစိုက်တယ်...
သူကအရက်သောက်တတ်ပါတယ်.. ဖြတ်ပါ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပေမယ်.. (ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ထိ)သောက်နေခဲ့ပါတယ်.
ချစ်လို့ပါဆုရယ်လို့စကားများပြီးတိုင်း တိုးတိုးလေးကျိတ်ရေရွတ်တတ်ပါတယ်..အဲ့လိုနဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့နေ့တစ်ခုကိုသူရောမေဗေစ့်ကောကြုံလိုက်ကြပါတယ်.. မနက်ခင်းလို(မှတ်မှတ်ရရပါပဲ.. ဒီလိုနိုဝင်ဘာလထဲမှာပေ့ါ.) သူ့ဆီကဖုန်းလာပါတယ်...
လိုင်းမကြည်မလင်နဲ့မို့ဘာပြောမှန်းကိုသေချာနားထောင်ရပါတယ်.. သူတို့သဘောင်္ကမ်းပြန်ကပ်တော့မယ်လုိ့ပြောပါတယ်.. ထိုင်းကနေ transit ပြန်မလုပ်ခင်ဘာဝယ်လာရမလဲဘာလဲညာလဲပေါ့.. ရတယ်.. ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပြန်လာရင်တော်ပြီလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်.. သူကအိုကေ လေ ဒါဆိုဖုန်းချတော့မယ် ဆုကို ကိုကိုချစ်တယ်နော်.. လို့ပြောပါတယ်.. (မှတ်မှတ်ရရ) မေဗေစ့်ကလဲ ချစ်ပါတယ်စောင့်နေမယ်နော် လို့ပြန်ပြောမိလိုက်ပါတယ်..ခပ်တိုးတိုးသဘောကျသလိုရယ်ပြီးဖုန်းချသွားပါတယ်..
စိတ်ထဲမှာလဲတစ်မျိူးကြီးဖြစ်သွားပါတယ်.. နောက်နေ့ညနေသုံးနာရီမှာ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်.. သူဆုံးသွားပါပြီတဲ့.. ရင်ထဲမှာဘာမှန်းကိုမသိလိုက်တော့တာပါ.. မနက်၁၀း၀၀ ခန့်ကလို့ပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်သိလိုက်ပါတယ်.. သူဖုန်းဆက်လာတာလဲ ၁၀း၀၀ ခန့်ကပါ.. အတိုပဲခြုန်းပြောပါမယ်.. သူ့၇ုပ်အလောင်းကိုထုံးစံအ၇ပင်လယ်ထဲပဲမျောခဲ့တာပေါ့.. နောက်မှသူနဲ့ပက်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၇န်ကုန်ကိုပြန်သယ်ပေးပါတယ်.. သူ့မှာအမေနဲ့ညီမပဲရှိပါတယ်.. ကိုယ်လဲ၁၇က်ခြားလောက်သွားနေပေးရတာပေါ့..
သူနေခဲ့တဲ့အပေါ်ထပ်ကိုသူ့ရဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ရှင်းပေးတဲ့အချိန်မှာ. သူ့ညီမလေးအ်ာငိုပါတယ်.. မေဗေစ့်နားမှာသူ့အကိုကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ့.. မေဗေစ့်လဲလန့်တာပေါ့.. အဲ့လိုနဲ့ပဲအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ကပဲ၇း၀၀လောက်ရှိပါပြီအငှားကားနဲ့ပဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်.. ကားပေါ်လဲတက်ပြီးရော.. ကားစထွက်တာနဲ့သူသုံးနေကြရေမွှေးနံ့စရပါတယ်.. လူက၇ိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်းကားဒရိုက်ဘာကြီးကိုကြည့်မိတော့သူလဲဘက်ကြည့်မှန်ကနေလှည့်လှည့်ကြည့်နေပါတယ်.. ပြတင်းပေါက်ဘက်ကိုကွေးပြီထိုင်လိုက်ရင်းဘုရားစာရွတ့်ရင်းနဲ့ပဲအိမ်ရောက်မှသက်ပြင်းချရပါတယ်.. ကားခပေးပြီးဆင်းတော့..ကလေးမအခုဘယ်ကပြန်လာတာလဲလို့မေးတယ်.. သူငယ်ချင်းအိမ်ကလို့ပြောတော့.. ကလေးမနားမှာခုနကယူနီဖောင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တွေ့နေလို့ပါလို့ပြောလာတယ်လူလဲကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်ထဲပြေးဝင်မိရပါတယ်.. နောက်နေ့မနက်ကြတော့လဲသံချောင်းခေါက်တဲ့ဦးလေးကညီးမောင်ညကအပြင်ထွက်ထိုင်တယ်နော်.. အကျီင်္အဖြူနဲ့လို့ပြောလို့ပိုပြီးလန့်ရပါတယ်..
အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့တွေအိမ်ပြန်နောက်ကျရင် လှိုင်ကအဒေါ်အိမ်မှာပဲအိပ်ရပါတော့တယ်..ဖြစ်ချင်တော့တော့မေဗေစ့်အိမ်ပေါ်တက်လာတာကိုအဒေါ်ကငုံ့ကြည့်မိတယ်.. မေဗေစ့်နောက်မှာသူပါလာပါတယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲပေးမဝင်လို့မနည်းငိုယိုပြီးတောင်းပန်ရပါတယ်.. ဒါတောင်ဦးလေးပြန်လာတဲ့အထိ လှေခါးမှာရေမွှေးနံ့တွေရနေတုန်းလို့ပြောတယ်.. တစ်ခါတစ်လေဆုရေလို့ခပ်တိုးတိုးခေါ်သံကြားရတတ်ပါတယ်..ရက်မလည်မချင်းမေဗေစ့်ကအသံလောက်ပဲကြားခဲ့ပေးမယ့်..ကျန်လူတွေတော့ပုံစံပါတွေ့ကြပါတယ်...ရက်မလည်ခင်မှာအိမ်မက်ပဲမက်သလိုလိုနဲ့ ..သူ့ကိုမနှင်ပါနဲ့ဆုအနားမှာပဲနေခွင့်ပေးပါလို့တောင်းပန်တယ်..
အိပ်ရာကလန့်နိုးတိုင်းငိုမိပါတယ်..ရက်လည်နေ့မတိုင်ခင်ရက်တွေမှာသူမေဗေစ့်နားမှာ၇ှိနေတယ်လို့လာလာပြောတတ်ပါတယ်. နောက်တော့သူတို့အိမ်ရဲ့အပေါ်ထပ်သူအခန်းထဲမှာဂစ်တာတီးသံတွေသီးချင်းညီးသံတွေကြားရတယ်လို့သူ့ညီမကပြောပြတယ်.. ရက်လည်ပြီးသွားတော့လဲမေဗေစ့်အိမ်ေ၇ှ့မှာညနက်တိုင်းအုတ်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်နေတတ်တဲ့အ၇ာ၇ှိဝတ်စုံနဲ့သူ့ကိုတချိူ့တချိူ့တွေ့မိကြတယ်လို့ပြောကြတယ်..၃ရက်လောက်ကြာတေ့ာအိမ်မက်ပဲမက်သလိုတကယ်လိုလိုနဲ့သူကဆုအနားမှာမနေတော့ပါဘူး..
ဆုကိုကို၇ှိနေတာကိုကြောက်နေမှာပဲ..ကိုကိုထွက်သွားပေးပါ့မယ်လို့ပြောပါတယ်.. မေဗေစ့်ကကိုကို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်..အခုတော့သွားတော့နော်လို့ပြောတော့သူပြုံးပါတယ်.. ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ကိုပြုံးပြပြီးမေဗေစ့်လဲလန့်နိုးသွားပါတယ်..အဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ဆီက Connection ပြတ်တောက်သွားပါတယ်..
( သစ္စာကြီးကြီးနဲ့ချစ်ခဲ့ပေးသော.. SE တေဇကို အား.. သတိ၇စွာဖြင့်)
Min Myo Min Nwe & သရဲ သဘက် ဘီလူး အစရှိသော ပေတလောကသားများအကြောင်း
Posted in: Fun,knowledge,literature,notice